कहिलेसम्म कुलमान ? -3ghumti
२०७८, आश्विन ७ गते बिहिवार
# संखुवासभा घटना
# क्रिकेट रंगशाला
# गण्डकी मुख्यमन्त्री
# मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल
# देशभरको मौसम
# मौसम पूर्वानुमान
# बजेट पारित
# एमसीसी अनुमोदन
# रामबहादुर थापा बादल
# बादलको प्रश्न
# share news
# सेनाको शक्ति प्रदर्शन
# पोखरा महानगरपालि
Sep 23 2021 | २०७८, आश्विन ७गते
कहिलेसम्म कुलमान ?
श्रावण २८, २०७८ बिहिवार ०१:०९ बजे
झण्डै ११ महिनापछि विद्युत प्राधिकरणमा किन कुलमान घिसिङ नै चाहियो ?
कुलमान बाहेक अरु किन काबिल भएनन् ?
प्राधिकरण रित्तो भएर कुलमान ल्याइएको हो त ? होइन ।
हितेन्द्रदेव शाक्यलाइ हटाएर कुलमान नै चाहिनुका अनेक कारण भए पनि मुख्य कारण चाहि माओवादी केन्द्रको राजनीतिक स्टन्ट नै मूख्य हो ।
कुलमान प्रति जनताको स्नेहभाव देखेर सोही समर्थन पाउन माओवादी कुलमान प्रति आकर्षित भएको जो कोहीले बुझ्न सक्छन् । कुलमानले ४ वर्ष विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा केहि चमत्कारिक परिणाम आएकै हुन् । वर्षेनी घाटामा जाने प्राधिकरणलाइ नाफामा ल्याएकै हुन् । दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुलुकलाइ मुक्ति दिलाएकै हुन् । त्यसैले त सारा नेपालीले कुलमानलाइ माया गरे ।
केपी ओली सरकारले उनलाई दोस्रो कार्यकालमा नदोहरयाएपछि उनको पुर्ननियुक्तिका लागि माइतीघरमा प्लेकार्ड बोकेर उज्यालो चाहनेले नाराबाजी गरे । यहि उनको लोकप्रियतालाइ माओवादी केन्द्रले अहिले क्यास गरेको छ । घुमाउरो पारामा माओवादीले कुलमानलाइ गुन लगाएको छ ।
राजनीतिक गुन डेन्जर पनि हुन्छ कुनै पनि बेला तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुलमानलाइ महंगो सावित नहोस् । नेपाली समाज यस्तो छ चाडै कसैलाइ देउता बनाइदिन्छ अनि छिनभरमै राक्षस पनि । देउता बनाइएका घिसिङलाइ यहि समाजले भोलि कुलंगारमा दर्ज नगरिदिओस् ।
त्यसैले पनि कुलमानले यसअघि आफैले बनाएका किर्तिमानीलाइ अब तोड्नु पर्ने छ । अघिल्लो कार्यकालमा लोडेसेडिङ मुक्त गराउदा भूइमान्छेका मन जितेका कुलमानका लागि अब त्यति मात्रैले पुग्दैन ।
प्राधिकरण भित्रको नीतिगत सुधार र दुरगामी प्रभाव पार्ने काम गर्नु पर्ने छ । भोलि जो कोही प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउदा उनले बनाएको प्रणालीले काम गर्न सक्ने हुनु पर्ने छ ।
असल नेतृत्व त्यही हुन्छ जसले आगामी पिढीकालागि सही निर्देश र प्रणालीको स्थापना गरिदिन्छ । उनी नहुदा पनि भोलिका दिनमा प्राधिकरण चल्न सक्ने आधार तयार पार्न सक्नुपर्छ ।
सधै भरी आफुलाइ मात्र केन्द्रमा राखेर प्रशंसामा रम्नु भन्दा ४ वर्ष पछि आउने नेतृत्वकालागि कस्तो प्रणाली बनाइ दिने कुलमानकालागि यहि चूनौति हो ।
हितेन्द्रदेव हुदा हुदै कुलमान नै चाहिने प्रणाली किन बन्यो ? उनले यसअघिको ४ वर्षमा नगरेको यहि काम अब गर्नु पर्ने छ । किनकी मुलुक सधै एउटै मान्छेको भरमा पर्न सक्दैन ।
कुलमानले जस्तै हितेन्द्रदेवले पनि गर्न सक्ने गरिको संरचनागत प्रणालीको व्यवस्था गर्नु कुलमानको अबको कर्तब्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा दुष्ट भावना भएका डाक्टर को थिए?
देश विकासमा वैदेशिक ब्यापार नीति
सहकारीको आवश्यकता र यसको प्रभाव
अख्तियार र प्रहरी प्रमुख नियुक्ति बदरको सन्देश
पूर्व युवराज्ञी हिमानी सडकमा !
देउवा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो
झिनो अंंकले बढ्यो नेप्से दुई वटा समुहले कमाउँदा ११ वटा समुहले गुमाए
एमाले अवरोधकै बीच बजेटसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
पर्खाल लड्यो, सेनापति सोझै डेरातिर
नेपाली सेना देशको लागि कि हाकिमको घरमा सेवा गर्नलाई हो ?
चिफसाब ! सेनाकाे सिग्नल युनिटहरुको दुःख पीडा पनि बुझियोस्
सेनामा यसरी हुने गर्छ सफाया
बुधवार १८ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट, कुन-कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ?
बादलको प्रश्न : मदन-आश्रितको हत्या किन भयो ?
एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रचण्डको ‘खतरनाक’ शर्त !